Asia - Bangkok Thursday, 28 July 2016
HEALTHY RIVERSHAPPY COMMUNITIESFOR NOW AND THE FUTURE
ပင်မစာမျက်နှာသတင်းစွမ်းအင်ကဏ္ဍရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဇီဝလောင်စာဆည်စီမံကိန်းများသံလွင်ဆည်များအထက်သံလွင်ဆည်တာဆန်းဆည်ရွာသစ်ဆည်ဒါးဂွင်ဆည်ဝဲကြီးဆည်ဟတ်ကြီးဆည်မြစ်အောက်ပိုင်းဒေသသို့ သက်ရောက်မှုများဧရာဝတီ/ အင်မိုင်ခ/ မလိခရဲရွာဆည်ပေါင်းလောင်းဆည်များရွှေလီဆည်များထံမသီဆည်ဒါးပိန်ဆည်ကျိုင်းတုံဆည်လောပီတရေအားလျှပ်စစ်မဲခေါင်းမြစ်ဝှမ်း ဖွံ့ဖြိုးရေးမြစ်ချောင်းများသံလွင်မြစ်ချင်းတွင်းမြစ်စစ်တောင်းမြစ်မဲခေါင်မြစ်ကုလားတန်မြစ်မြစ်ဝများရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများတရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမြန်မာနိုင်ငံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအခြားစိုးရိမ်ဖွယ်ရာများပွင့်လင်းမြင်သာမှုလူမှုရေး ဆိုးကျိုးများသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ဆိုးကျိုးများဆည်၏ လုံခြုံမှုစစ်အင်အားချဲ့ထွင်မှုသတ္တုတွင်းတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းဒီရေရောက်တောများဆုံးရှုံးရခြင်းလှုပ်ရှားမှုများထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များBRN ၏ လှုပ်ရှားမှုများလမ်းညွှန်နည်းနာများအရင်းအမြစ်ဆည်များနှင့် ပတ်သက်၍ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ယူရေး လမ်းညွှန်ချက်များမြန်မာနိုင်ငံ၏ မြစ်များနှင့် ပတ်သက်သည့်ဥပဒေတရုတ်နိုင်ငံ၏ ဆည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းBRN ၏ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများဗီဒီယိုဓါတ်ပုံ	ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များ
သံလွင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးကွန်ယက်မှ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် Thursday, 13 August 2015 ၂၀၁၅ သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်မွန် နှင့် ကရင် ပြည်နယ်တွင်းနေထိုင်သူများ သံလွင်ရေကာတာတည်ဆောက်ပါက ရေလွှမ်းမိုးမှုအန္တာရယ် ပိုမိုကြီးမားလာမည်ကို... Read More...
တိုင်းရင်းသားဒေသတွင် ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများကို လျစ်လျုရှုပြီး ရေကာတာစီမံကိန်းများ... Saturday, 14 March 2015 ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သည့် နိုင်ငံတကာမြစ် ချောင်းများဆိုင်ရာနေ့အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံမြစ်ချောင်းများဆိုင်ရာ ကွန်ယက်၏ သဘောထား... Read More...
မြစ်ဆုံကိစ္စ “ပြည်သူတွေကိုပဲ အခြေပြုထားတယ်” ဆိုတဲ့ ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင် Monday, 21 March 2016 ဧရာဝတီ ဧရာဝတီ| March 20, 2016 အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်... Read More...
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ပြန်စရေး မြန်မာကို တရုတ် တောင်းဆိုမည် Friday, 18 March 2016 ဧရာဝတီBy ဧရာဝတီ | March 18, 2016 ရပ်ဆိုင်းထားသည့် မြစ်ဆုံရေကာတာ... Read More...
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးပါ ထိခိုက်လာနိုင်ဟုဆိုကာ ကယားပြည် ရေကာတာစီမံကိန်းများ ကန့်ကွက် Tuesday, 15 March 2016 Kantarawaddy TimesCreated on Tuesday, 15 March 2016 11:58 | Written by... Read More...
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းပေးဖို့ တောင်းဆို Monday, 14 March 2016 RFA (Myanmar) 2016-03-14 ဧရာဝတီမြစ်ဆုံမှာ ကျင်းပတဲ့... Read More...
မြစ်ဆုံကို အစွမ်းကုန် ကာကွယ်ကြ Monday, 14 March 2016 Eleven Media GroupPublished on Mon, 03/14/2016 - 01:43■သဘာဝ ခွဲတမ်းကမ္ဘာမြေပြင်ကြီးဟာ... Read More...
19 January 2015	11 November 2015	Hits: 371	သံလွင်မြစ်ရေကာတာစီမံကိန်းများ ရပ်တန့်ပေးရန်အိတ်ဖွင့်စာ
၁၉ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၅မြန်မာလျှစ်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနအမှတ် (၃ဂ)၊ဇေယျဌာနီလမ်း၊နေပြည်တော်။သို့မြန်မာလျှစ်စစ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေကာတာစီမံကိန်းများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပြဿနာအမျိုးမျိုးကိုရင်ဆိုင်ခံစားနေရသော ပြည်သူလူထုကို ကိုယ်စားပြုကာ မြန်မာနိုင်ငံရှိမြစ်များ၏ဂေဟစနစ်ကိုအကာအကွယ်ပေးရန်နှင့် အကြီးစားမြစ်ချောင်းပိုင်းဆိုင်ရာ
Read more ...	13 January 2009	30 October 2015	Hits: 3899	မြန်မာပြည်၏ ဆည်များတည်ရှိရာ မြေပုံ
ဆည်တည်ရှိရာနေရာကို ကလစ်ပါ မြန်နိုင်ငံမြစ်ချောင်းများ ဆိုင်ရာ ကွန်ယက် မှ အမှာသတင်းစကား
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိကမြစ်ကြီးများနှင့် ရေဝေမြစ် များတွင် ဆည်ကြီးများကို တရုတ်၊ ထိုင်းနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံများမှ ကုမ္ပဏီများ က တည်ဆောက်နေလျက် ရှိပါသည်။ ဤဆည်တည်ဆောက်မှု များကြောင့် လူများပြောင်းရွှေ့ရခြင်း၊ စစ်တပ်များ တိုးချဲ့ချ ထားလာခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ တိုးများလာခြင်းနှင့် ပြန်လည် ပြင် ဆင်ရန် မဖြစ်နိုင် သည့် သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးရမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပါ သည်။ ထိုမျှမက လူသန်းပေါင်းများစွာ၏ ဘ၀ထူထောင်ရေးနှင့် အစားအစာဖူလုံမှု ကို ခြိမ်းခြောက်နေလျက် ရှိပါသည်။ ထုတ်လုပ်သည့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်များနှင့် ၀င်ငွေများသည် စစ်အစိုးရနှင့် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများ အဖို့သာ ဖြစ်စေပါသည်။
ဧရာဝတီ/ အင်မိုင်ခ/ မလိခဆည်များ	ရဲရွာဆည်	ပေါင်းလောင်းဆည်များ	ရေအားလျှပ်စစ် လုပ်ငန်းများ	လောပီတရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း	ရွှေလီဆည်များ	ဆည်၏ လုံခြုံအန္တရာယ်ကင်းမှု	BRN ၏ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများ
ပဋိပက္ခလောင်စာများ Wednesday, 23 May 2012 လက်တလော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း... Read More...
ကချင် “ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး” မှ ကြုံတွေ့ရသော သင်ခန်းစာများ Tuesday, 08 May 2012 မေလ ၂ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် တွင် ထုတ်ဝေသည်။အစီရင်ခံစာ... Read More...
Stop Damming the Chindwin Wednesday, 07 December 2011 Burma's military government, together with the government of India, is planning to buildagiant hydroelectric dam on the Chindwin River,amajor... Read More...
တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ Wednesday, 24 September 2008 တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း လျှပ်စစ် နိုင်ငံတကာ... Read More...
ထိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ Wednesday, 24 September 2008 ထိုင်းနိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေး အာဏာပိုင်အဖွဲ့... Read More...
အခြား ကုမ္ပဏီများ Wednesday, 24 September 2008 အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် [Asian Development Bank (ADB)]ကိုလင်ကို... Read More...
မြန်မာနိုင်ငံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ Wednesday, 24 September 2008 အေရှဝေါလ် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (Asia World Co.)မြန်မာနိုင်ငံ... Read More...
ဆည်များနှင့် ပတ်သက်၍ Wednesday, 24 September 2008 ဆည်များနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏ မေးလေ့ရှိသည့်... Read More...
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဆည်တည်ဆောက်ရေး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Wednesday, 24 September 2008 တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဆည်များကို အခြေပြုသည့်... Read More...
ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ယူရေး လမ်းညွှန်ချက်များ Wednesday, 24 September 2008 ကမ္ဘာ့ဆည်များဆိုင်ရာ ကော်မရှင် [World Commission on Dams (WCD)]... Read More...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြစ်များနှင့် ပတ်သက်သည့်ဥပဒေ Wednesday, 24 September 2008 ရေအရင်းအမြစ်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် မြစ်များဆိုင်ရာ... Read More...
© 2016 မြန်မာနိုင်ငံ မြစ်ချောင်းများဆိုင်ရာ ကွန်ယက်. All Rights Reserved.
သံလွင်ဆည်များအထက်သံလွင်ဆည်တာဆန်းဆည်ရွာသစ်ဆည်ဒါးဂွင်ဆည်ဝဲကြီးဆည်ဟတ်ကြီးဆည်မြစ်အောက်ပိုင်းဒေသသို့ သက်ရောက်မှုများဧရာဝတီ/ အင်မိုင်ခ/ မလိခရဲရွာဆည်ပေါင်းလောင်းဆည်များရွှေလီဆည်များထံမသီဆည်ဒါးပိန်ဆည်ကျိုင်းတုံဆည်လောပီတရေအားလျှပ်စစ်မဲခေါင်းမြစ်ဝှမ်း ဖွံ့ဖြိုးရေးမြစ်ချောင်းများ
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုလူမှုရေး ဆိုးကျိုးများသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ဆိုးကျိုးများဆည်၏ လုံခြုံမှုစစ်အင်အားချဲ့ထွင်မှုသတ္တုတွင်းတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းဒီရေရောက်တောများဆုံးရှုံးရခြင်းလှုပ်ရှားမှုများ
ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များBRN ၏ လှုပ်ရှားမှုများလမ်းညွှန်နည်းနာများအရင်းအမြစ်
ဆည်များနှင့် ပတ်သက်၍ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ယူရေး လမ်းညွှန်ချက်များမြန်မာနိုင်ငံ၏ မြစ်များနှင့် ပတ်သက်သည့်ဥပဒေတရုတ်နိုင်ငံ၏ ဆည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းBRN ၏ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများဗီဒီယိုဓါတ်ပုံ